Times24 Nepal » निकै भाइरल नर्स काण्ड बाइरियो …
निकै भाइरल नर्स काण्ड बाइरियो …
काठमाडौं / नेपाली कमेडी भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । भिभिन्न बिसयमा समाबेश गरि मनिषहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् ।
हास्नु स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ त्यसैले दर्सकहरुको स्वस्थलाई मध्यनजर गर्दै युटुब च्यानल राष्ट्रियता टिभीले बिभिन्न भिडियोहरु सर्बजनिक गर्ने क्रममा एम.आर. क्रेजीको भाग ३ सर्बजनिक गरेको छ ।
भिडियोमा समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सानो सानो कुराहरु जुन तपाईहरुले भुल्दै जानु भएको छ त्यस्ता कुराहरुलाइ लिएर बनाइएको तलको भिडियोले तपाईहरुलाई भरपुर मनोरंजन दिने छ ।
मनोरन्जनका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका भिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो । यसमा अभिनय गर्ने कलारहरु तथा प्राबिधीक टोली सबै पुर्वकै हुन् । भिडियोमा ईस्वर दुलाल, सोनिया न्यौपाने, पबित्रा ढुंगान, प्रतिक्षा पोख्रेलको अभिनय रहेको छ ।
भिडियोलाई विप्लप अधिकारीले छायांकन गरेका हुन् भने सम्पादन तथा निर्देशन दुलालकै रहेको छ ।
भिडियोमा कलाकारहरुले यो सानो प्रसङघलाई निकैनै कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गगरेका छन्
भिडियो हेरौ …
प्रकाशित मिति ४ माघ २०७६, शनिबार २२:५८
सुपा देउराली माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
वडाध्यक्ष सरद बराललाई कुखुरा चो’रको ओ’रोप । प्र’हरीमा उ’जुरी
बागलुङ कालिका माईको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
स्वर्गद्वारी माताको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
स्वयम्भू नाथको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
अनलाइन खोजी प्रतिभा प्रा.लि द्वारा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न।
मुक्ति नाथको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
मलेसियामा पाकिस्तानी सुरक्षा गार्ड भित्र्याउने । नेपाललाई घा’टा
मि’र्गौला फेर्छु अनि सरकार चलाउछु । केपी ओली
नि’र्मला पन्तको ह’त्या’रा प’क्राउ गर्ने तयारी ।
फेरि बढ्यो एलपी ग्यासको मुल्य । ओली सरकार
सरकारले भू’मिही’न सु’कुम्बासीलाई जग्गा दिने भएको छ । केपी ओली
विमान परिचारिकाले नचिने पछि डा. बाबुराम भट्टराई ‘निराश’।
पुष महिनामा मात्रै ५२ हजार श्रमिक विदेश पलायन । सरकारलाई बधाई
गोर्खामा टिपरले कि’चेर मनमाया तामाङको मृ’त्यु २६ वटा टिपर तो’डफो’ड।
रवि लामिछानेलाई किन फसाएको आफैले खुलासा गरे…भिडियो हेरौ